Mother With AIDS And ART - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
AIDS အိတျ ဈချေါ ခုခံအားကဆြငျးဝဒေနာရှငျမိခငျမြားနဲ့ ART ကုထုံးမြား
ရောဂါပိုးဝငျလို့ဝဒေနာ တဈခုခု ခံစားလာရရငျ၊ ခကျြခငျြးဆိုသလိုပဋိဇီဝဆေးတှေ နဲ့
တိုကျဖကျြ တားဆီးရတာ၊ ကုရိုးကုစဉျ ထုံးစံဖွဈပါတယျ။ အဲဒါတှနေဲ့ မတူတာက၊ အိတျချြ အိုငျဗီချေါ၊ ခု
ခံအားကြ ဗိုငျးရပျပိုးဝငျရောကျခံရတဲ့အခါ၊ ဗိုငျးရပျသဆေေး ( Antiretroviral Therapy. ART )ခကျြခငျြး
မပေးသေးဘဲ၊ သူရဲ့ CD4ခုခံဆဲလျ တဈမြိုးရဲ့ ပမာဏကို၊ အခြိနျမှနျလလေ့ာစဈဆေးပွီး၊ အဲဒီပမာဏ
(ယခငျက ၂၀၀). အခုတော့ (၄၀၀-၅၀၀) အထိ ကဆြငျးလာပွီဆိုမှ၊ (ART ) ဆေးပေးကုသပါတယျ။
ဘာလို့ဆိုတော့၊ ဆေးတှကေ ပွငျးထနျဆိုးကြိုးပေးနိုငျတာရယျ၊ စသောကျပွီဆိုကတညျးက၊ နစေ့ဉျမ
ပကျြမကှကျ တဈသကျလုံး၊ အခြိနျအတိအကြ သောကျဘို့ လိုအပျတာရယျ၊ ဆေးသောကျပကျြကှကျရငျ
အခြိနျမမှနျရငျ၊ ဆေးယဉျလာပွီး ဆေးမတိုးတော့ဘဲ၊ ရောဂါပိုဆိုးရှားးလာမှာရယျ၊ ဆေးယဉျပါးပိုးတှကေ
တခွားလူတှဆေီသို့၊ ကူးစကျပြံ့ပှားမှာရယျ၊ ဆေးဈေးတှေ ကွီးမားရှားပါးတာတှရေယျကွောငျ့၊ WHO
guide line ၊ သတျမှတျထားတဲ့အတိုငျး၊ CD4 ပမာဏ အဲဒီလာကျကလြာမှ၊ ( ART) ကုသမှု စတငျပေး
ကွတယျ။ နစေ့ဉျ ၂ကွိမျ အခြိနျအတိအကြ သောကျသုံး စေ ပွီး၊ အခြိနျမှနျ ရကျခြိနျးအတိုငျး ပွနျလာ ပွ
မိခငျမှ ကလေးသို့ ကူးစကျမှု ကာကှယျခွငျး ( Prevention of mother to children transmission
ရှေးခယျြပိုငျခှငျ့မရှိတဲ့၊ ကလေးတှအေတှကျ အဲ့ဒီရောဂါရှိတဲ့၊ မိခငျထံမှာ သန်ဓစေတငျရှိပွီဆိုရငျ၊
ကိုယျဝနျဆောငျကာလကတညျးက၊ မိခငျထံမှ ကလေးဆီသို့ ခကျြကွိုးကတဆငျ့ ကူးစကျနှုနျးဟာ
၁၅-၂၀% အထိရှိနိုငျတယျ။ အဲလို မကူးစကျစဘေို့၊ PMCT ကုသခွငျးနဲ့ မိခငျကို၊ ကိုယျဝနျဆောငျ
ကာလအတှငျး၊ ဗိုငျးရပျသဆေေးတှကွေိုတငျတိုကျကြှေးထားရငျ၊ အဆိုပါ ကူးစကျမှုကို အတျောလေး
အဲလိုဆေးသောကျသုံးဘို့ကို၊ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကွောကျတဲ့အတှကျမိဘတှကေ၊ ဆေးသောကျ
ျခြိနျ ပကျြကှကျရငျ၊ ဆေးယဉျလာမှာ စိုးရိမျတဲ့အတှကျ၊ ကလေးကို ဘေးထှကျဆိုးကြိုးရမှာ စိုးရိမျတဲ့ အ
တှကျ ၊ PMCT ကုထုံးကို ငွငျးပယျခငျြကွတယျ။ သခြော ရှငျးပွပွီး၊ အကြိုးရှိမှနျးသိတဲ့ မိခငျတှေ ကတော့
၊ ကုထုံးကို လကျခံပွီး အခြိနျမှနျဆေးသောကျဘို့၊ အထူးသတိထားကွတာ လညျး၊ တှရေ့ ပါတယျ။
WHO ကတော့၊ ART ဆေး(သို့) PMCT ဆေးကုထုံးတှကေို၊ မိဘတှနေဲ့သခြော ဆှေး နှေး အပွီး၊ ကုသ
မှု လကျခံမှာလား၊ ငွငျးပယျမှာလား ဆိုတာ၊ သူတို့ စိတျတိုငျးကြ ရှေးခယျြခှငျ့ပွုထားပါတယျ။
တကယျကတော့၊ မိဘတှအေနနေဲ့ မိမိတို့ရဲ့၊ အပွဈမဲ့ ရငျသှေးလေးဆီရောဂါဆိုးအခြောငျ ရရှိ
မသှား အောငျ၊ ကာကှယျပေးနိုငျစှမျးရှိတဲ့၊ PMCT ကုထုံးကို လကျခံရယူသငျ့တယျ။
အသကျငယျရှယျတဲ့ HIV ရှိနသေူ လူယျလူရှယျတှကေလညျး၊ သူတို့ကိုယျသူတို့ နကေောငျးနေ
တယျလို့၊ ထငျရတဲ့ အစောပိုငျး၊ ကာလတှမှော ( ART) ကုသမှုကို စောစောစီးစီးစတငျ၊ မ သောကျခငျြကွ
သေးဘူး။ တသကျလုံး အခြိနျနာရီ မိနဈ,စက်ကနျ့မလှဲစဘေဲ၊ နစေ့ဉျအခြိနျမှနျသောကျရမဲ့ ကိစ်စကို ဝနျလေး
တတျကွ သေးတယျ။ ဒါတောငျမှဆေးကိုတနတေ့ကွိမျသာအခြိနျမှနျသောကျစတေဲ့ရိုးရှငျးတဲ့ နညျးလမျး
နဲ့စတငျ တဲ့၊ ပထမလိုငျး ကုထုံးကိုတောငျ ငွငျးပယျခငျြကွတာ ဖွဈတယျ။ ဒီကုထုံးက၊ တနတေ့ခါပဲေ
မပူရပမေဲ့၊ သတိမမှေ့ာ မပူရပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဆေးသောကျတာ၊ နှဈ,ကာလ ကွာလာရငျ၊ လူ၁၀ယောကျရှိ
ရငျ ၂ယောကျလောကျမှာ၊ ရောဂါပိုးက ခုခံနိုငျစှမျးပျေါလာစတေယျ၊၊ အဲဒီအခါ ပိုပွငျးတဲ့ ပိုပွီးလညျး၊
ဈေးကွီးတဲ့၊ ဒုတိယစား (သို့) တတိယတနျးစား ဆေးတှအေထိ တိုးမွှငျ့သောကျသုံးဘို့ လိုအပျ
အာဖရိက က၊ ယူဂနျဒါ လိုနိုငျငံတှမှော၊ ( PMCT ) ကုထုံးနဲ့၊ ကလေးဆီသို့ မိခငျထံမှ ခုခံအားကြ
ရောဂါမကူးအောငျ ကာကှယျတာက ၂၀၀၁ ခုနှဈကတညျးက၊ အောငျမွငျနခေဲ့တယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့၊ အဲ
ဒီက လူမှုရေးတကျကွှလှုပျရှားသူ၊ မူလာနီ ဘီရီမူမာဆိုနဲ့ သူရဲ့အမြိုးသမီးတို့ဟာ၊ HIV ရောဂါပိုးရှိသူ
အဖွဈ၊ နထေိုငျနကွေတာ ၁၅နှဈရှိပွီဖွဈပမေဲ့၊ ( PMCT) ကုထုံးနဲ့၊ ကာကှယျမှုရယူနိုငျတဲ့အတှကျ၊
သူတို့သမီး၂ယောကျလုံးမှာ၊ ( HIV) ပိုး ကငျးစငျကွပါတယျ။ သူတို့ဆီမှာတော့ (HIV) ရှိတဲ့ ဖခငျတှကေ
ပါ၊ ကိုယျဝနျဆောငျတှကေိုပေးတဲ့၊ ဗိုငျးရပျသဆေေးတှေ ရယူသုံးစှဲလိုနကွေတာ၊ တှခေဲ့ကွရတယျ။
ဂလိုဘယျ ဖနျး (Global fund ,WHO, union စတဲ့ အဖှဲ့တှရေဲ့၊ ကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့၊ PMCT ကုထုံး
စတငျနပွေီဖွဈတယျ။ အကောငျးဆုံးကတော့၊ HIV ရှိသူအခငျြးခငျြး အိမျထောငျပွုကွရငျဖွဈစေ၊ မိဘ
တဈယောကျယောကျက၊ ရောဂါပိုးမရှိသေးသူဖွဈနရေငျဖွဈစေ၊ ကလေးမယူတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
၂ယောကျလုံး ရောဂါပိုးရှိနသေူဖွဈနရေငျတောငျမှ၊ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ က၊ ပိုးအရေ အတှကျ
ျခငျြး၊ ပိုးအ မြိုးအ စားခငျြး မတူညီကွဘူးဆိုတော့၊ တဈယောကျကနေ၊ နောကျတဈယောကျကို၊ ထပျမံ
မကူးစကျဘို့၊ ကှနျ ဒုနျး ( Condom) ကိုသာ အမွဲသုံးသငျ့ပါတယျ။ ကလေးမယူသငျ့ပါဘူး။ တကယျလို့
ကလေးယူ မယျဆို ရငျလညျး၊ သကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျမြားနဲ့၊ ဆှေး နှေးတိုငျပငျသငျ့ပါတယျ။
မမြှျောလငျ့ဘဲ၊ ကိုယျဝနျ ရလာ ရငျလညျး၊ ကလေးဆီရောဂါမကူးစကျအောငျ၊ ( PMCT ) ကုထုံးကို
အခြိနျမှီယူဘို့၊ သကျဆိုငျရာ ဆရာ ဝနျတှနေဲ့၊ အမွနျဆကျသှယျ သငျ့တယျ။ ညှနျ ကွားတဲ့အတိုငျး၊
စနဈတကသြာ လိုကျနာသောကျ သုံးရငျ၊ ကလေးဆီကို ရောဂါပိုး မကူးစကျနိုငျအောငျ၊ ကာကှယျနိုငျ
ျပါလိမျ့မယျ။ အခြိနျမှနျဆေးသောကျ ဘို့၊ အခြိနျမှနျပွသဘို့ကတော့၊ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။
မိခငျနို့ကနလေညျး၊ ကလေးဆီသို့ ( HIV ) ရောဂါပိုးက (၁၅%)ခနျ့၊ ကူးစကျစနေိုငျသေးတယျ။
အထူသဖွငျ့၊ မိခငျနို့သီးခေါငျးမှာ အကျကှဲနတောနဲ့ အနာအဆာရှိရငျ၊ နို့တိုကျရာကတဆငျ့၊ ကူးစကျ
စတေယျ။ နို့ဗူးပဲတိုကျမယျဆိုရငျလညျး၊မသနျ့ရှငျးရငျ၊ ဝမျးပကျြဝမျးလြှောရောဂါရပွီး၊ ကလေးကအ
လှယျတကူ ၊ သဆေုံးစနေိုငျတယျ။ နို့မှုနျ့အမြိုးအစားညံ့ရငျ(သို့) ဖြျောနညျးမမှနျရငျလညျး၊ ကလေး
ပေါကျစမှာ၊ ပိနျလျှီပွီး အာဟာရ ခြို့တဲ့တာကွောငျ့၊ ရောဂါဘယဝငျလှယျကာ၊ အသကျတိုလှယျ စပွေနျ
ျပါတယျ။အဲဒါကွောငျ့၊ မှေးပွီးရငျ နို့ခြိုပဲတိုကျမလား။ အစားထိုးနို့မှုနျ့ပဲတိုကျမလားဆိုတာ၊ရှေးခယျြ
ျနိုငျဘို့ ၊ ကနျြးမာရေးဝနျ ထမျးတှကေ အကွောငျးအကြိုးမြားနဲ့တကှ၊ မိဘတှကေို ရှငျးပွပွီးသူတို့
တတျနိုငျတာကို စိတျတိုငျးကြ ရှေးခယျြစတေယျ။ သူတို့ရှေးတဲ့နညျးလမျးအတိုငျး၊ အောငျမွငျစှာ
တိုကျကြှေးနိုငျဘို့၊ အကူအညီပေးနိုငျဘို့ ကွိုးစားကွ တယျ။ တဈခုသတိထားရမှာက၊ နို့တိုကျလိုကျ
နို့ဗူးတိုကျလိုကျ ထမငျးကြှေးလိုကျနဲ့၊ mixed Diet ကြှေးနညျးမဖွဈဘို့ သခြောရှောငျကဉျြရမယျ။
မိခငျနို့တိုကျမယျဆိုရငျလညျး၊ အသကျ၆လအထိသာ၊ မိခငျနို့တဈမြိုးထဲတိုကျပွီး ၆လပွညျ့တာ
နဲ့မိခငျနို့ဖွတျကာ၊ ဖွညျ့စှကျစာပွညျ့စုံအောငျကြှေးတာ၊ အစားထိုးနို့မှုနျ့(သို့) နှားနို့ ဆိတျနို့ တမြိုးမြိုး
ပွောငျးလဲ တိုကျကြှေးတာ ပွုလုပျရပါမယျ။ ၆လကြျောအထိရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ နို့ဆကျတိုကျနမေယျဆိုရငျ၊
ကလေးဆီသို့ HIV ပိုးကူးစကျနိုငျခွေ ပိုမို မွငျ့မားတဲ့အတှကျ၊ မိခငျနို့ကို ဖွတျပဈသငျ့တာ ပါ။ အသေး
စိတျ အခကျြအလကျတှေ သိနားလညျ လိုကျနာနိုငျအောငျ၊ သကျဆိုငျရာ ဆေးရုံဆေးခနျးတှမှော၊ အမွဲ
ပွသ နဘေို့လညျး၊ အထူးလိုအပျပါတယျ။
အာဖရိက က၊ ကမျပါလာဆေးရုံရဲ့ လလေ့ာမှုတဈခုမှာ၊တှရေ့တာက၊ ကုထုံးခံယူတဲ့အမြိုးသမီး
၁၉၀ အနကျ ၂၀% ကသာ၊ အခြိနျမှနျလညျးလာပွပွီး CD4 အရအေတှကျ နဲ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှု
တှခေံယူခဲ့တာကို၊ ၂၀၁၂ ခုနှဈက တှခေဲ့ရတယျ။ ဒီလို (follow up ) ပကျြကှကျမှုက၊ ဆေးကုသမှု
မအောငျမွငျနှုနျးမွငျ့တကျလာစတေယျ။ ဆေးယဉျပါးမှု ဖွဈပျေါစသေလို၊ ရောဂါကိုလညျး ပိုဆိုး လာစေ
တယျ။အဲဒါကွောငျ့၊ ( defaulters ) ပကျြကှကျသူတှမေဖွဈအောငျ၊ လူမှုအဖှဲ့အစညျးတှကေရော
မိသားစုဝငျတှကေပါ၊ ကူညီပံ့ပိုးပေးပွီး အခြိနျမှနျ ပွနျလညျပွသစသေငျ့တယျ။ လူနရရဲ့နရေပျလိပျစာ
နဲ့ဆကျသှယျရမဲ့ ဖုနျးနံပါတျတှကေိုလညျး၊ သခြော အတိအကြ ပေးထားသငျ့ပါတယျ။
စီဒီ၎ CD4 ပမာဏကိုရတှေကျတဲ့စကျနဲ့ ဗိုငျးရပျကောငျရေ စဈတဲ့စကျတှကေ၊ ဆေးရုံတိုငျးမှာ
မရှိတာကလညျး၊ ကုသရေးမှာ နှောငျ့နှေးမှု အခကျအခဲ ဖွဈစပေါတယျ။ အဝေးကိုပို့စဈရတဲ့၊ အဲဒီစကျ
တှရေဲ့ အဖွမေရသေးခငျမှာ၊ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှရေဲ့ မြားပွားတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေ၊ ရောဂါကို
ကွိုတငျ စဈဆေး ပိုငျးဖွတျပေးနိုငျတာကလညျး၊ အထောကျအကူကောငျးရစတေယျ။ မိသားစုဝငျတှနေဲ့
ဗျောလံတီ ယာ လူမှုရေးအဖှဲ့တှရေဲ့၊ ကူညီစောငျ့ရှောကျမှု၊ နားလညျမှုရှိစှာ၊ ဖေးမမှုတှကေလညျး၊
ရောဂါကာကှယျ ကုသရာမှာ အထူးလိုအပျပါတယျ။
တခြို့က ဆေးဝါးတှရေဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကို ကွားဖူးနားဝနဲ့ ၊ ကွောကျလနျ့ပွီး၊ ဘယျကုထုံးကိုမှ
မခံယူလိုကွဘဲ၊ ဆေးမွီးတိုတှနေဲ့ အခြိနျဖွုနျးကွတာမြိုးလညျး၊ တှရေ့တတျပါတယျ။ အဲဒီလို မဖွဈသငျ့
ဘဲ၊ ( HIV) ရောဂါပိုး မကူးစကျအောငျ၊ တလငျတမယားစနဈကငျြ့သုံးခွငျး၊ လိငျအပြျောအပါးမလိုကျစား
ခွငျး၊ မူးယဈဆေးဝါးနဲ့ စိတျကို ပွောငျးလဲစတေဲ့ ဆေးတှမေသုံးခွငျး၊ အပွုအမူအနအေထိုငျ မဆငျခွငျ
နိုငျရငျ၊ ကှနျဒုနျကို စနဈတကသြုံးစှဲခွငျး၊ ဆေးဝနျထမျးတှအေနနေဲ့ သူတပါးထံမှ၊ မိမိထံသို့ရောဂါမကူး
စကျခံရ အောငျ တိကတြဲ့အကာအကှယျမြားသခြောလိုကျနာကငျြ့သုံးခွငျး စတာတှေ၊ ဆောငျရှကျ
နှဈသိမျ့ဆှေးနှေးကာ တိုငျပငျသငျ့တယျ။ ဆောငျရနျရှောငျရနျအားလုံး သိရှိအောငျပွုလုပျပွီး အတိအ
အခြုပျအားဖွငျ့ဆိုရရငျ၊ ခုခံအားကရြောဂါမရအောငျ အနအေထိုငျ ဆငျခွငျ၊ ရလာခဲ့ရငျလညျး
ဆေးရုံဆေးခနျးသို့ ပွသပွီး၊ အကောငျးဆုံးအကွံဉာဏျနဲ့ လိုအပျတဲ့ ကုသမှုတှကေို အခြိနျမီ၊
ဒေါကျတာမွမွခယျြ ( ကလေးအထူးကုဆရာဝနျကွီး)AIDS အိတ် စ်ခေါ် ခုခံအားကျဆင်းဝေဒနာရှင်မိခင်များနဲ့ ART ကုထုံးများ
ရောဂါပိုးဝင်လို့ဝေဒနာ တစ်ခုခု ခံစားလာရရင်၊ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဋိဇီဝဆေးတွေ နဲ့
တိုက်ဖျက် တားဆီးရတာ၊ ကုရိုးကုစဉ် ထုံးစံဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ မတူတာက၊ အိတ်ခ်ျ အိုင်ဗီခေါ်၊ ခု
ခံအားကျ ဗိုင်းရပ်ပိုးဝင်ရောက်ခံရတဲ့အခါ၊ ဗိုင်းရပ်သေဆေး ( Antiretroviral Therapy. ART )ချက်ချင်း
မပေးသေးဘဲ၊ သူရဲ့ CD4ခုခံဆဲလ် တစ်မျိုးရဲ့ ပမာဏကို၊ အချိန်မှန်လေ့လာစစ်ဆေးပြီး၊ အဲဒီပမာဏ
(ယခင်က ၂၀၀). အခုတော့ (၄၀၀-၅၀၀) အထိ ကျဆင်းလာပြီဆိုမှ၊ (ART ) ဆေးပေးကုသပါတယ်။
ဘာလ်ို့ဆိုတော့၊ ဆေးတွေက ပြင်းထန်ဆိုးကျိုးပေးနိုင်တာရယ်၊ စသောက်ပြီဆိုကတည်းက၊ နေ့စဉ်မ
ပျက်မကွက် တစ်သက်လုံး၊ အချိန်အတိအကျ သောက်ဘို့ လိုအပ်တာရယ်၊ ဆေးသောက်ပျက်ကွက်ရင်
အချိန်မမှန်ရင်၊ ဆေးယဉ်လာပြီး ဆေးမတိုးတော့ဘဲ၊ ရောဂါပိုဆိုးရွားးလာမှာရယ်၊ ဆေးယဉ်ပါးပိုးတွေက
တခြားလူတွေဆီသို့၊ ကူးစက်ပျံ့ပွားမှာရယ်၊ ဆေးဈေးတွေ ကြီးမားရှားပါးတာတွေရယ်ကြောင့်၊ WHO
guide line ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း၊ CD4 ပမာဏ အဲဒီလာက်ကျလာမှ၊ ( ART) ကုသမှု စတင်ပေး
ကြတယ်။ နေ့စဉ် ၂ကြိမ် အချိန်အတိအကျ သောက်သုံး စေ ပြီး၊ အချိန်မှန် ရက်ချိန်းအတိုင်း ပြန်လာ ပြ
မိခင်မှ ကလေးသို့ ကူးစက်မှု ကာကွယ်ခြင်း ( Prevention of mother to children transmission
ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့၊ ကလေးတွေအတွက် အဲ့ဒီရောဂါရှိတဲ့၊ မိခင်ထံမှာ သန္ဓေစတင်ရှိပြီဆိုရင်၊
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလကတည်းက၊ မိခင်ထံမှ ကလေးဆီသို့ ချက်ကြိုးကတဆင့် ကူးစက်နှုန်းဟာ
၁၅-၂၀% အထိရှိနိုင်တယ်။ အဲလို မကူးစက်စေဘို့၊ PMCT ကုသခြင်းနဲ့ မိခင်ကို၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်
ကာလအတွင်း၊ ဗိုင်းရပ်သေဆေးတွေကြိုတင်တိုက်ကျွေးထားရင်၊ အဆိုပါ ကူးစက်မှုကို အတော်လေး
အဲလိုဆေးသောက်သုံးဘို့ကို၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောက်တဲ့အတွက်မိဘတွေက၊ ဆေးသောက်
်ချိန် ပျက်ကွက်ရင်၊ ဆေးယဉ်လာမှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက်၊ ကလေးကို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရမှာ စိုးရိမ်တဲ့ အ
တွက် ၊ PMCT ကုထုံးကို ငြင်းပယ်ချင်ကြတယ်။ သေချာ ရှင်းပြပြီး၊ အကျိုးရှိမှန်းသိတဲ့ မိခင်တွေ ကတော့
၊ ကုထုံးကို လက်ခံပြီး အချိန်မှန်ဆေးသောက်ဘို့၊ အထူးသတိထားကြတာ လည်း၊ တွေ့ရ ပါတယ်။
WHO ကတော့၊ ART ဆေး(သို့) PMCT ဆေးကုထုံးတွေကို၊ မိဘတွေနဲ့သေချာ ဆွေး နွေး အပြီး၊ ကုသ
မှု လက်ခံမှာလား၊ ငြင်းပယ်မှာလား ဆိုတာ၊ သူတို့ စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
တကယ်ကတော့၊ မိဘတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့၊ အပြစ်မဲ့ ရင်သွေးလေးဆီရောဂါဆိုးအချောင် ရရှိ
မသွား အောင်၊ ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့၊ PMCT ကုထုံးကို လက်ခံရယူသင့်တယ်။
အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ HIV ရှိနေသူ လူယ်လူရွယ်တွေကလည်း၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ နေကောင်းနေ
တယ်လို့၊ ထင်ရတဲ့ အစောပိုင်း၊ ကာလတွေမှာ ( ART) ကုသမှုကို စောစောစီးစီးစတင်၊ မ သောက်ချင်ကြ
သေးဘူး။ တသက်လုံး အချိန်နာရီ မိနစ်,စက္ကန့်မလွဲစေဘဲ၊ နေ့စဉ်အချိန်မှန်သောက်ရမဲ့ ကိစ္စကို ဝန်လေး
တတ်ကြ သေးတယ်။ ဒါတောင်မှဆေးကိုတနေ့တကြိမ်သာအချိန်မှန်သောက်စေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်း
နဲ့စတင် တဲ့၊ ပထမလိုင်း ကုထုံးကိုတောင် ငြင်းပယ်ချင်ကြတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီကုထုံးက၊ တနေ့တခါပဲေ
မပူရပေမဲ့၊ သတိမေ့မှာ မပူရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆေးသောက်တာ၊ နှစ်,ကာလ ကြာလာရင်၊ လူ၁၀ယောက်ရှိ
ရင် ၂ယောက်လောက်မှာ၊ ရောဂါပိုးက ခုခံနိုင်စွမ်းပေါ်လာစေတယ်၊၊ အဲဒီအခါ ပိုပြင်းတဲ့ ပိုပြီးလည်း၊
ဈေးကြီးတဲ့၊ ဒုတိယစား (သို့) တတိယတန်းစား ဆေးတွေအထိ တိုးမြှင့်သောက်သုံးဘို့ လိုအပ်
အာဖရိက က၊ ယူဂန်ဒါ လိုနိုင်ငံတွေမှာ၊ ( PMCT ) ကုထုံးနဲ့၊ ကလေးဆီသို့ မိခင်ထံမှ ခုခံအားကျ
ရောဂါမကူးအောင် ကာကွယ်တာက ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းက၊ အောင်မြင်နေခဲ့တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အဲ
ဒီက လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊ မူလာနီ ဘီရီမူမာဆိုနဲ့ သူရဲ့အမျိုးသမီးတို့ဟာ၊ HIV ရောဂါပိုးရှိသူ
အဖြစ်၊ နေထိုင်နေကြတာ ၁၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့၊ ( PMCT) ကုထုံးနဲ့၊ ကာကွယ်မှုရယူနိုင်တဲ့အတွက်၊
သူတို့သမီး၂ယောက်လုံးမှာ၊ ( HIV) ပိုး ကင်းစင်ကြပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာတော့ (HIV) ရှိတဲ့ ဖခင်တွေက
ပါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကိုပေးတဲ့၊ ဗိုင်းရပ်သေဆေးတွေ ရယူသုံးစွဲလိုနေကြတာ၊ တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။
ဂလိုဘယ် ဖန်း (Global fund ,WHO, union စတဲ့ အဖွဲ့တွေရဲ့၊ ကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့၊ PMCT ကုထုံး
စတင်နေပြီဖြစ်တယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ HIV ရှိသူအချင်းချင်း အိမ်ထောင်ပြုကြရင်ဖြစ်စေ၊ မိဘ
တစ်ယောက်ယောက်က၊ ရောဂါပိုးမရှိသေးသူဖြစ်နေရင်ဖြစ်စေ၊ ကလေးမယူတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၂ယောက်လုံး ရောဂါပိုးရှိနေသူဖြစ်နေရင်တောင်မှ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် က၊ ပိုးအရေ အတွက်
်ချင်း၊ ပိုးအ မျိုးအ စားချင်း မတူညီကြဘူးဆိုတော့၊ တစ်ယောက်ကနေ၊ နောက်တစ်ယောက်ကို၊ ထပ်မံ
မကူးစက်ဘို့၊ ကွန် ဒုန်း ( Condom) ကိုသာ အမြဲသုံးသင့်ပါတယ်။ ကလေးမယူသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့
ကလေးယူ မယ်ဆို ရင်လည်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များနဲ့၊ ဆွေး နွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
မမျှော်လင့်ဘဲ၊ ကိုယ်ဝန် ရလာ ရင်လည်း၊ ကလေးဆီရောဂါမကူးစက်အောင်၊ ( PMCT ) ကုထုံးကို
အချိန်မှီယူဘို့၊ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာ ဝန်တွေနဲ့၊ အမြန်ဆက်သွယ် သင့်တယ်။ ညွှန် ကြားတဲ့အတိုင်း၊
စနစ်တကျသာ လိုက်နာသောက် သုံးရင်၊ ကလေးဆီကို ရောဂါပိုး မကူးစက်နိုင်အောင်၊ ကာကွယ်နိုင်
်ပါလိမ့်မယ်။ အချိန်မှန်ဆေးသောက် ဘို့၊ အချိန်မှန်ပြသဘို့ကတော့၊ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
မိခင်နို့ကနေလည်း၊ ကလေးဆီသို့ ( HIV ) ရောဂါပိုးက (၁၅%)ခန့်၊ ကူးစက်စေနိုင်သေးတယ်။
အထူသဖြင့်၊ မိခင်နို့သီးခေါင်းမှာ အက်ကွဲနေတာနဲ့ အနာအဆာရှိရင်၊ နို့တိုက်ရာကတဆင့်၊ ကူးစက်
စေတယ်။ နို့ဗူးပဲတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း၊မသန့်ရှင်းရင်၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါရပြီး၊ ကလေးကအ
လွယ်တကူ ၊ သေဆုံးစေနိုင်တယ်။ နို့မှုန့်အမျိုးအစားညံ့ရင်(သို့) ဖျော်နည်းမမှန်ရင်လည်း၊ ကလေး
ပေါက်စမှာ၊ ပိန်လှီ်ပြီး အာဟာရ ချို့တဲ့တာကြောင့်၊ ရောဂါဘယဝင်လွယ်ကာ၊ အသက်တိုလွယ် စေပြန်
်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်၊ မွေးပြီးရင် နို့ချိုပဲတိုက်မလား။ အစားထိုးနို့မှုန့်ပဲတိုက်မလားဆိုတာ၊ရွေးချယ်
်နိုင်ဘို့ ၊ ကျန်းမာရေးဝန် ထမ်းတွေက အကြောင်းအကျိုးများနဲ့တကွ၊ မိဘတွေကို ရှင်းပြပြီးသူတို့
တတ်နိုင်တာကို စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်စေတယ်။ သူတို့ရွေးတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်း၊ အောင်မြင်စွာ
တိုက်ကျွေးနိုင်ဘို့၊ အကူအညီပေးနိုင်ဘ်ို့ ကြိုးစားကြ တယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက၊ နို့တိုက်လိုက်
နို့ဗူးတိုက်လိုက် ထမင်းကျွေးလိုက်နဲ့၊ mixed Diet ကျွေးနည်းမဖြစ်ဘို့ သေချာရှောင်ကျဉ်ရမယ်။
မိခင်နို့တိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း၊ အသက်၆လအထိသာ၊ မိခင်နို့တစ်မျိုးထဲတိုက်ပြီး ၆လပြည့်တာ
နဲ့မိခင်နို့ဖြတ်ကာ၊ ဖြည့်စွက်စာပြည့်စုံအောင်ကျွေးတာ၊ အစားထိုးနို့မှုန့်(သို့) နွားနို့ ဆိတ်နို့ တမျိုးမျိုး
ပြောင်းလဲ တိုက်ကျွေးတာ ပြုလုပ်ရပါမယ်။ ၆လကျော်အထိရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ နို့ဆက်တိုက်နေမယ်ဆိုရင်၊
ကလေးဆီသို့ HIV ပိုးကူးစက်နိုင်ခြေ ပိုမို မြင့်မားတဲ့အတွက်၊ မိခင်နို့ကို ဖြတ်ပစ်သင့်တာ ပါ။ အသေး
စိတ် အချက်အလက်တွေ သိနားလည် လိုက်နာနိုင်အောင်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ၊ အမြဲ
ပြသ နေဘို့လည်း၊ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
အာဖရိက က၊ ကမ်ပါလာဆေးရုံရဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ၊တွေ့ရတာက၊ ကုထုံးခံယူတဲ့အမျိုးသမီး
၁၉၀ အနက် ၂၀% ကသာ၊ အချိန်မှန်လည်းလာပြပြီး CD4 အရေအတွက် နဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု
တွေခံယူခဲ့တာကို၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒီလို (follow up ) ပျက်ကွက်မှုက၊ ဆေးကုသမှု
မအောင်မြင်နှုန်းမြင့်တက်လာစေတယ်။ ဆေးယဉ်ပါးမှု ဖြစ်ပေါ်စေသလို၊ ရောဂါကိုလည်း ပိုဆိုး လာစေ
တယ်။အဲဒါကြောင့်၊ ( defaulters ) ပျက်ကွက်သူတွေမဖြစ်အောင်၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကရော
မိသားစုဝင်တွေကပါ၊ ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး အချိန်မှန် ပြန်လည်ပြသစေသင့်တယ်။ လူနရရဲ့နေရပ်လိပ်စာ
နဲ့ဆက်သွယ်ရမဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်း၊ သေချာ အတိအကျ ပေးထားသင့်ပါတယ်။
စီဒီ၎ CD4 ပမာဏကိုရေတွက်တဲ့စက်နဲ့ ဗိုင်းရပ်ကောင်ရေ စစ်တဲ့စက်တွေက၊ ဆေးရုံတိုင်းမှာ
မရှိတာကလည်း၊ ကုသရေးမှာ နှောင့်နှေးမှု အခက်အခဲ ဖြစ်စေပါတယ်။ အဝေးကိုပို့စစ်ရတဲ့၊ အဲဒီစက်
တွေရဲ့ အဖြေမရသေးခင်မှာ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ များပြားတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက၊ ရောဂါကို
ကြိုတင် စစ်ဆေး ပိုင်းဖြတ်ပေးနိုင်တာကလည်း၊ အထောက်အကူကောင်းရစေတယ်။ မိသားစုဝင်တွေနဲ့
ဗော်လံတီ ယာ လူမှုရေးအဖွဲ့တွေရဲ့၊ ကူညီစောင့်ရှောက်မှု၊ နားလည်မှုရှိစွာ၊ ဖေးမမှုတွေကလည်း၊
ရောဂါကာကွယ် ကုသရာမှာ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
တချို့က ဆေးဝါးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ကြားဖူးနားဝနဲ့ ၊ ကြောက်လန့်ပြီး၊ ဘယ်ကုထုံးကိုမှ
မခံယူလိုကြဘဲ၊ ဆေးမြီးတိုတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းကြတာမျိုးလည်း၊ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို မဖြစ်သင့်
ဘဲ၊ ( HIV) ရောဂါပိုး မကူးစက်အောင်၊ တလင်တမယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်း၊ လိင်အပျော်အပါးမလိုက်စား
ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေတဲ့ ဆေးတွေမသုံးခြင်း၊ အပြုအမူအနေအထိုင် မဆင်ခြင်
နိုင်ရင်၊ ကွန်ဒုန်ကို စနစ်တကျသုံးစွဲခြင်း၊ ဆေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ သူတပါးထံမှ၊ မိမိထံသို့ရောဂါမကူး
စက်ခံရ အောင် တိကျတဲ့အကာအကွယ်များသေချာလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း စတာတွေ၊ ဆောင်ရွက်
နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးကာ တိုင်ပင်သင့်တယ်။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အားလုံး သိရှိအောင်ပြုလုပ်ပြီး အတိအ
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရရင်၊ ခုခံအားကျရောဂါမရအောင် အနေအထိုင် ဆင်ခြင်၊ ရလာခဲ့ရင်လည်း
ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ ပြသပြီး၊ အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်နဲ့ လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုတွေကို အချိန်မီ၊
ဒေါက်တာမြမြချယ် ( ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)